Taxanaha Liiska Baaldiga: Saddex musht oo loogu talagalay safarkii ugu dambeeyay ee gabdhaha Seychelles
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Taxanaha Liiska Baaldiga: Saddex musht oo loogu talagalay safarkii ugu dambeeyay ee gabdhaha Seychelles
Jebinta Wararka Caalamka • kariska • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • jiga • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Safarka Gabdhaha Seychelles
Mas'uuliyadaha maalinlaha ah kaliya ma aha kuwo culeys leh laakiin sidoo kale waxay daadinayaan oo go'doominayaan. Tani waa sababta dalxiisyadu ay muhiim u yihiin.
Kaalay oo la soco afartaas haween markay fulinayaan alaabada liiska baaldi oo aad ku raaxaysato safarka gabdhaha ee Seychelles qurux badan.
Ku-boodboodka jasiiraddu waa mid waajib ku ah jasiiraddan quruxda badan iyo cajiibka ah.
Safar noocee ah ayuu dhammaystiri lahaa iyada oo aan la koolkoolin oo aan la cunin cunto macaan - oo aanad adigu iskaa u samayn?
Inga, Sheila, Ifat, iyo Ela waxay ka nasteen noloshoodii walaaca badnayd, waxay galeen diyaarad u socota Seychelles si ay ula kulmaan, meel ka fog dadka waalan, maxaa u noqon karay safarkoodii ugu fiicnaa abid abid!
Qeybta afar gees waxay udub dhexaad u ahayd xiisaha ay u qabaan fikirka ku saabsan boodboodka jasiiradda, iyagoo diiradda saaraya jasiiradaha Mahé, Praslin iyo Ste. Anne. Waxay la kulmeen farxad aad u fara badan oo ay ku soo mareen jasiiradda weyn ee Mahé, iyagoo sahamin iyo sawirro ka soo qaaday goobo caan ah oo taariikhi ah iyo dhaqamo ku wareegsan magaalada yar ee yar ee Victoria. Waxay ku riyaaqeen aragtida ugu quruxda badan ee ka timid Mission Lodge, oo ku dhimatay sawirrada dhirta dhirta ee Ingiriiska ee Marianne North, oo indha indheynaysa koonfurta guud ahaan Mahé, waxayna si xiiso leh u baareen Seychelles 'UNESCO World Heritage Site oo ku taal Praslin magaalada Vallée de Mai ee cajiibka ah. de-mer lowska, iyo ku dhufashada qorraxda kuleylka xeebta jilicsan ee budada ah ee ku wareegsan jasiiradaha.
Taladayada: Jasiiradaha Seychelles waxay kakooban yihiin 115 jasiiradood, mid walbana waxay leedahay astaamo u gaar ah, astaamo u gaar ah, mana doonaysid inaad ka maqnaatid midkood midkood intaad dhex mushaaxayso jasiiradaha baabuur kiro ah ama bas yar oo leh hage dalxiis oo muujinaya adiga iyo saaxiibbadaada waa inuu arkaa dhibco jasiirad jibbaarasho waa waajib sugan, hawo ama doon; qorshee safarkaaga adoo adeegsanaya shirkad maxalli ah oo ruqsad u haysta safar qaas ah.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa maalinta gabdhaha, anagoo ka faa'iideysaneyna xeebo soo jiidasho leh oo si joogto ah ugu sareeya liistada 'kuwa ugu fiican adduunka', sida Anse Lazio oo ku taal Jasiiradda Praslin ama xitaa La Digue ee 'Anse Source D'Argent', dabinno kuwaas oo dammaanad laga qaadayo qoyskaaga iyo asxaabtaada oo cagaar ku ah xaasidnimo. Wixii dabeecadaha jecel iyo jimicsiga qaar, waxaan kuu soo jeedinaynaa jidadka quruxda badan ee ku xeeran jasiiradaha; badankood waxay u furan yihiin vistas aad u fiican - iyo hagayaasha dalxiisyada shatiyeysan waxay si fiican u yaqaanaan xariirka maxalliga ah. Safar doon ah oo loogu talagalay Ste. Anne Marine Park si ay ugu bogaan noocyada badda ee layaabka leh waa lama huraan; safar ugu aado meelaha barakaysan ee jasiiradaha sida Curieuse ama Inaadeerkiis si ay ugu dhex gasho dhaqamada ilaalinta ee guuleysta. Wixii waayo-aragnimo ah ee aan la iloobi karin, ballan sii joogitaan dheer Bird Island, halkaas oo dadka kaliya ee aad la kulmi doonto ay yihiin kalluumeysato jilicsan oo u imanaya buul iyo buul inta u dhexeysa Maajo iyo Oktoobar, malaayiin iyaga ka mid ahna khalad ma noqon karaan!
Markii ay ka faa'iideysanayeen sidii ay uga soo bixi lahaayeen baytariyadooda, gabdhuhu waxay diiradda saareen safarkii cusboonaysiinta intii ay joogeen Seychelles; ku nasashada xeebta iyo barkadda dhinaceeda ayaa runtii ahayd qaybta ugu wanaagsan ee gabadhooda.
Talo-bixinteena: Seychelles waxay leedahay tiro aad u fara badan oo isboorti oo qalaad; Qaado waqtigaaga inaad doorato midka kugu habboon! Si kastaba ha noqotee, qaybta ugu muhiimsan ee waqtiga gabdhuhu fasax yahay waa wakhti koolkoolin, wax ka wanaagsan maalin ku raaxaysiga dadka aad jeceshahay. In lagu xoqo wax soo saarka maxaliga ah ee qalaad, ee lagu duugo nuxurka dabiiciga ah sida citronella, qumbaha ama xitaa vanilj ayaa hubaal ka yareyn doonta daalka iyo noocyada qaab nololeedka casriga ah ee aan joogsiga laheyn. La qaado daqiiqad gabdhahaaga si aad ugu baxdo safar isbadal iyo dib u habeyn guud, maskaxda, jirka iyo nafta.
Dhadhamiya dhadhanka creole
Intii ay ku sugnaayeen jasiiradaha, 4-tii haween ee reer Israa’iil waxay ku baxeen safar cunno cunno leh, iyagoo u kuur galaya dhadhanka dhadhanka leh dhadhanka aan caadiga ahayn ee cunnada loo yaqaan 'creole cuisine', oo caan ku ah isku darka dhirta iyo dhir udgoon.
Talo-bixinteena: Waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan safarkaaga, cunnooyinka cunnada ayaa runtii ah dheriga dhaqammada ee ka soo baxa isku-dhafka cunnooyinka Yurub oo ay saameyn ku leeyihiin soogalootiga ka imanaya Hindiya iyo Shiinaha. Halkan waxaad ku dhadhamin doontaa kalluunka ugu badan, kalluunka la dubay ee kalluunka laga soo saaray, iyo baraf-gacmeedyada lagu sameeyay kalluunka la soo qabtay. Marka laga reebo cunnooyinka wanaagsan, waa inaad booqataa meelaha maxalliga ah ee Seychellois tagto, sidaa darteed adiguba waad ku raaxeysan kartaa cunnooyinka wanaagsan, cuntooyinka dhaqameed ee qiimaha soo jiidashada leh, iyo baararka maxalliga ah iyo shaashadda agteeda xeebta ugu wanaagsan ee is biirsaday ee noloshaada!